अनसनको ७ औं दिन डा. केसी आईसीयुमाः केसीद्वारा स्वास्थ्य जाँच गर्न समेत अस्वीकार - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com अनसनको ७ औं दिन डा. केसी आईसीयुमाः केसीद्वारा स्वास्थ्य जाँच गर्न समेत अस्वीकार - खबर प्रवाह
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि बर्षौदेखि सरकारसँग माग राख्दै आमरण अनसनमा उत्रनुभएका डा.गोविन्द केसी ७ दिन देखि जुम्लामा १९ औं पटक आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ । दुईबर्ष अघि नेपाल सरकारले डा.सीसँग चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने बचनबद्धताका साथ गरेको सम्झौता अहिले सम्म कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बिषम परिस्थितिमा पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत बेवास्ता गरेका कारण पुनः आमरण अनसन बस्न बाध्य भएको उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
उहाँ १२ बुद्धे माग अघि सार्दै गत भाद्र २९ गतेदेखि जुम्लामा आमरणअनसन बस्नुभएको थियो । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि उहाँको स्वास्थ्य परिक्षण गरिरहनुभएका चिकित्सकहरुले डा.केसीलाई तुरुन्त अस्पताल भर्ना गरी उपचार शुरु नगरे जे पनि हुन सक्ने बताएका थिए । तर डा।केसीले भने आफु जनताका लागि मर्न तयार तर सरकारसँग माग पुरा नभएसम्म अस्पताल पनि नजाने र कुनै सम्झौता पनि नगर्ने भन्दै आउँनुभएको थियो ।
शनिबार राति करिब पौने एघार बजे प्रहरीले डा। गोविन्द केसीलाई जबरजस्ती उठाएर अस्पताल पुर्यायो । १९ औं सत्याग्रहको घोषणा गरेको सातौं दिन आज आईतबार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आईसियु कक्षमा डा। केसीलाई राखिएको छ । डा।केसीले भने माग पुरा नगर्न सरकारले अपहरण शैलीमा आफुलाई उठाएर अपताल लगेको बताउँदै आउँनुभएको छ ।
डा.केसीको स्वास्थ्य परिक्षणमा खटिएका डा। प्रविणकुमार गिरी, धिरज गुरुङ, अनुपमंगल समाल र सविना थापाद्धारा हस्ताक्षरीत डा। केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी पत्रमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुदाँ संक्रमणको खतरा बढ्नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
डा।केसीको अनसनमा एकेबद्धता जनाउँदै सरकारको रवैयाको बिरोधमा आईतबार माईतीघर मण्डलामा व्यानर सहित निस्किएको समर्थकहरुले बिरोध जनाएका खबर आजको समाचार पत्रले प्रकाशन गरेको छ ।